Deluxe Backpack X-chimiro Banner
Deluxe Backpack X-chimiro Banner
X-Shaped Backpack mireza, inozivikanwawo seMochila banner X banner or Human billboard backpack banner, ndeyepamusoro-inobata, nharembozha uye isina kuremerwa yekushambadzira chishandiso kune chero mhando yebhizinesi.Imwe yemagadzirirwo edu anozivikanwa ebhegi mabheji
Applications:Indoor & Outdoor Advertising, Shows, Exhibitions, Zviitiko, Fairs, Promotions, Michato, Mapato, Photo Booths, Press Conferences, Semina, Matanho, Concerts etc.
Backpack X banner inoshandisa imwechete deluxe bhegi, huremu huremu hwakaumbwa 3D-foam kumashure pani ine cushion uye mhepo inoyerera chiteshi dhizaini, Matanho anogadziriswa, aya anovimbisa kuti anopfeka akasununguka;iva nehomwe inokubatsira kuchengeta mapepa ekushambadza, uchisiya anopfeka nemaoko emahara.
Izvipromotion knapsackinosanganisira homwe yekuchengetera X pole.Banner iri nyore kumisa, ingobatanidza X banner chigadziko matanda kubhegi uye batanidza mureza pamwe grommets mukona imwe neimwe (Banner isingabatanidzi) kuti zvikorekedzo panoperera danda rimwe nerimwe.
Kushambadzira kwemunhu nharembozha inzira inoshamisa yekumira kunze munzvimbo yakamanikana uye kukwezva kutarisisa kwevangangodaro vatengi uye kuwedzera traffic uye kutengesa mune chero chiitiko, kutengeserana show, kana kuratidzwa.
Patent chigadzirwa, innovation mureza kukwira dhizaini.Yakatangwa kugadzirwa neWZRODS pasi rese
Chiedza chechiedza chakaumbwa 3D-furo kumashure pani ine cushion uye inobvumira kuyerera kwemhepo dhizaini dhizaini, inopa yakasununguka kushandisa ruzivo.
Imba ine zippered uye mamwe mahomwe anopa imwe nzvimbo yekusunungura maoko ako.
Bhandi rinogadziriswa rinodzivirira musana kubva kuzembera kumashure mumhepo ine simba.
Hook dhizaini pamabhandi emabhodhoro emvura
Oxford zvinhu zvinoita kuti bhegi rinyanye kusimba uye kugara kwenguva refu kushandiswa.
Pole mucarbon composite fiber, simba repamusoro & rakasimba kupfuura aluminium kana girazi fiber pole
Item code Printing Size Kurema kurongedza saizi
Bhegi X 120cm*50cm 1.2KG 54*30.5*5.5CM
Tsvaga zvimwe zvedu zvimwekufamba banner banner
Zvakapfuura: Backpack mureza & sign
Zvinotevera: Tangi Yemvura
Deluxe Kufamba M-shape Backpack Advertising